Mayelana NATHI - CHANGSEN CO., Ltd
Isi-Dongguan I-Changsen Electronic Technology Co, Ltd. yasungulwa ngo-Agasti 2016, ngokugxila ekwakhiweni nasekusebenzeni kwebhodi lesifunda le-PCBA. Ku- Mashi 2017, kwasungulwa umhlangano wokukhiqiza webhodi wesifunda we-PCBA, futhi ngoJuni 2017, kwasungulwa i-PCBA yesifunda yebhodi yokukhiqiza idiphu yokukhiqiza. Ku- Ngo-Agasti 2019, kuzokwandiswa izintambo zokukhiqiza ezingama-SMT eziyisithupha kanye nolayini abathathu bokukhiqiza ukwenza ngcono ukukhiqizwa nokukhiqizwa kwamandla wamabhodi wesifunda e-PCBA.
I-Dongguan Changsen Electronic TechnologyCo., Ltd.yibhizinisi lokukhiqiza elihlanganisa i-R & D, ama-andsales wokukhiqiza wamabhodi wesifunda e-PCBA, egxile ku-R & D, ukuklama, ukukhiqiza nokukhiqiza kwamabhodi wesifunda we-PCBA. Imikhiqizo isetshenziswa kuzo zonke izinhlobo ze-smarthome, isekhethi elihlanganisiwe, ukunikezwa kwamandla eselula, i-Bluetooth, ihedsethi, umsindo, ibhodi lesikwele le-PCBA nebhodi lokulawula le-PCBA. Kunama-mounter ama-SMT ayi-12, amaphrinta wokunamathisela ama-solder ayi-6, ama-solderingmachines ayisithupha, imishini engu-3 yama-soldering nemigqa emi-5 yokuhlangana.
Inikeza ikakhulukazi ukuthuthukiswa nokukhiqizwa kwamabhodi we-PCBA we-Amazon, i-Ali yamazwe omhlaba, izinsiza zomhlaba wonke, iJingdong ne-tmall. I-Itis ithengiselwe amazwe aseYurophu afana ne-United States, Canada, India, Australia, South Korea, Japan, Britain kanye namanye amazwe ase-Europe kanye neChina. Inani lonyaka lokukhipha lenkampani licishe libe yizigidi ezingama-60.
Umhlangano wangaphambi kokudayiswa uzoxhumana ngenkuthalo namakhasimende ngemininingwane eningiliziwe, izidingo zamakhasimende, imingcele yemikhiqizo, amazinga wekhwalithi, ukuhlinzeka ngokubonisana, ukwamukela izingcingo kanye nama-oda eposi, nokunikezela ngezinsizakalo ezahlukahlukene ezilula nezinsizakalo zezezimali. Nikeza amakhasimende isixazululo esingcono kakhulu senani lentengo yokusebenza kwezentengiso, ukulandelela ngenkuthalo ukusayina inkontileka, ukulethwa kwempahla nokusiza amakhasimende ukuxazulula ubunzima.
Ngemuva kokuthengiswa: 1. Uma kuyinkinga yekhwalithi yomkhiqizo uqobo, kuholela ekwanelisekeni. Sizosiza ikhasimende ukuxazulula inkinga ngokushesha ngangokunokwenzeka ngesikhathi esivunyelwene ngaso. 2. Uma umkhiqizo ungeke usetshenziswe ngokujwayelekile ngenxa yezici zabantu. Sichazela ikhasimende imbangela yenkinga, okukhombisa ukuthi inkinga enjalo ayihlanganisiwe iwaranti yethu, bese sinikeza ezinye izixazululo kwikhasimende ngokwenkinga yekhasimende.